नेपाली फुटबलमा म्याच फिक्सिङ चलिरहेकै छ
२०७४ फागुन १३ आइतबार १२:१५:००
काठमाडौं । आगामी चैत १४ गते अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को चुनाव हुँदैछ । चुनावी मैदानमा एन्फाको नेतृत्व सम्हाल्नका लागि पूर्व उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुँवर उत्रिएका छन् । दुबै टिमले आ–आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
फिफाबाट भ्रष्टाचारको आरोपमा १० वर्ष प्रतिबन्धमा परेका गणेश थापाको विरुद्धमा लामो समय लडेका शेर्पासँग चुनावको बारेमा बाह्रखरीका सरोज तामाङले गरेको कुराकानीः
चुनावको माहोल र समीकरण कस्तो बन्दैछ ?
समीकरण हाम्रो खास त्यस्तो खासै केही छैन । हामीले माघ २४ गते जुन घोषणा गर्यौं, त्यो बाहेक अन्य केही छैन । हाम्रो टिमबाट उमेदवार अलि बढी छन् । दाबी विरोधपछि अन्तिम नामावली प्रकाशित हुन्छ, त्यसपछि फेरि नाम फिर्ता लिने समय छ । त्यसबेला हाम्रो साथीहरूले नाम फिर्ता लिनेछन् । अनि विधानअनुसारको टिम घोषणा गरेर हामी अघि बढ्छौं ।
तपाईंको प्यानलमा उपाध्यक्षलगायत केन्द्रीय सदस्यमा दाबी गर्ने धेरै छन्, कसरी मिलाएर लानुहुन्छ ?
त्यस्तो छैन । हामीलाई जम्मा ४ जना उपाध्यक्ष चाहिनेमा ६ जना छन् । त्यसमा २ जनाले फिर्ता गर्न बाँकी छ । त्यो हामी म्यानेज गर्दैछौं । धेरै साथीहरूको के छ भने फुटबलमा परिवर्तन हुनुपर्छ । पद भन्दा पनि ठूलो कुरा परिवर्तनको लागि जस्तोसुकै पनि त्याग तपस्या गर्न साथीहरू तयार छन् ।
बि डिभिजनका साथीहरूमा त्यो म्यानेज भइसकेको छ । ए डिभिजनका क्लबहरूमा पनि म्यानेज भइसकेको छ । अब केही जिल्लाका साथीहरूसँग म्यानेज गर्न बाँकी छ । सदस्यमा पनि त्यति खास समस्या छैन ।
पदीय बाँडफाँडमा तपाईंकै पक्षमा पनि असन्तुष्ट त निस्किएला नि ?
अब यो नेपालमा हुने त स्वभाविकै हो । तर मैले सोचेको जस्तो भएन । जस्तै– मैले सुरुमा जिल्ला अधिवेशन सकिँदा २२–२३ जना उपाध्यक्ष होला, ३२–३३ जना केन्द्रीय सदस्य होला भन्ने थियो । तर त्यसो भएन । अहिले हामीलाई १२ जना केन्द्रीय सदस्य चाहिनेमा १७–१८ जना देखिएका छन् । ४ जना उपाध्यक्ष चाहिनेमा ६ जना देखिएका छन् ।
टिम घोषणा गर्ने समय लामो भएका कारण हामी मिलाइहाल्छौं । यसमा कुनै समस्या छैन ।
विगतको पराजयबाट कतिको सतर्क भएको छ ?
मैले २०७० सालमा एन्फा विधान र विधिअनुसार जानुपर्छ भनेर मुद्दा उठाएको थिएँ । त्यो मुद्दाको अन्त्य भनेको निर्वाचन थियो । किनभने अध्यक्षलाई कारबाही गरेको थियो । एउटा उपाध्यक्षको पद खाली थियो । त्यतिबेला मध्यवती निर्वाचनमा मलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा अफर आएको थियो । तर त्यो लिँदा एउटा पदमा झुकेको जस्तो हुन्छ । चुनाव जित्ने भन्दा पनि चुनावको अन्त्य गरेको मात्र हो ।
यसपालि चाहिँ मैले अभियान हैन कि चुनाव नै लड्दैछु । यो निर्वाचनमा म एक्लै छैन । पूरै कार्यसमिति लड्दैछ । सिंगै देशका प्रतिनिधि लड्दैछन् ।
यसपालि २०–२२ वटा क्लब र जिल्ला चुनाव नलडी मलाई सहयोग गर्ने भएका छन् । बाँकी रहेको १७ वटा जिल्लामात्रै हामीसँग चुनाव लड्दै छन् । ५० प्रतिशत त हामी सजिलै कटाउँछौं ।
घात–प्रतिघात हुने सम्भवना पनि त उत्तिकै छ नि ?
यो पटक धेरै सम्भावना कम छ । पहिले जसको कारण चुनाव हारेका थियौं, उहाँहरू यो पटक हामीसँगै हुनुहुन्छ । अविश्वास सधैं हुने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । एउटा घटनामा अविश्वास हुन सक्छ, अर्कोमा विश्वास हुन सक्छ । उहाँहरूको प्रतिबद्धता छ ।
क्लब र जिल्लामा हामी दुई तिहाईमा छौ । त्यसकारण घातप्रतिघात हुने सम्भावना कम छ । हाम्रो विपक्षमा उठेको पक्षको टिम नै नपुग्ने सम्भावना देख्छु । टिममा लड्ने साथीहरू कतिपयको भोटिङ अधिकार नै छैन । जबकी अध्यक्षका प्रत्यासी मणि कुँवरजीको पनि भोटिङ राइट्स नै छैन । मेरो त भोटिङ राइट्स छ । उहाँहरूको त्यस्तो उमेदवार छन् ।
उहाँहरूको कार्यकालले १६ महिनासम्म लिग पनि गराउन सक्नु भएन । ग्रासरुट लेभलको कार्यक्रम पनि गर्न सक्नु भएन ।
उहाँहरूले १६ महिनामा के गर्नुभयो भन्दा ढुकुटीमा भएको २–३ करोड खर्च गर्ने काममात्रै गर्नुभयो । सँगै बसेका साथीहरूले मूल्याङ्कन त गर्छन् नि । हिजो सँगै किन बसेको भन्दा उहाँहरूले केही राम्रो गर्छ कि भनेर पो बसेको हो त कतिपय साथिहरू । अब नगरेपछि त्यहाँ बसिरहने कुरा पनि भएन । मेरो पनि परीक्षालिनु पर्यो नि त, त्यसैले यो पटक सबै साथीहरू हामीसँग छन् ।
नेपाली फुटबलको विकासका लागि तपाईंको एजेण्डा के हो ?
यसमा एजेण्डा क्लियर छ । मैले गत साल पनि उठाएको हो । सबै भन्दा पहिले विधि र विधानअनुसार संस्थालाई चलाउनु पर्यो । सामूहिक नेतृत्व र विकेन्द्रीकरण हुनुपर्यो ।
सामूहिक नेतृत्व भनेको एन्फाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यले पनि काम गर्ने अधिकार पाउनुपर्यो । यतिमात्रै नभएर एन्फाका समिति पनि क्रियाशिल हुनुपर्छ । जिल्ला फुटबल संघले पनि काम गर्ने अधिकार पाउनुपर्यो ।
एन्फा क्रियाशील हुनका लागि विधि र विधानअनुसारको नियम बनाउनुपर्छ । जस्तो– एन्फाको विधान छ तर कार्यविधि, निर्देशिका र नियमवाली छैन । यो तीन वटा चिज नभइन्जेल कार्यान्वयन हुँदैन ।
जिल्लाको विधान छैन । आर्थिक रुपमा खर्च गर्न आर्थिक नियमवाली छैन । कर्मचारी सञ्चालन र नियुक्तिको लागि कर्मचारी सञ्चालन नियमावली छैन । संस्थाको संरचना अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । विभिन्न समितिको कार्यविधि र निर्देशिका छैन । नियम कानुनबाट फुटबल संघ अहिले अपांग छ ।
त्यसैले हामी आएको तीन महिनासम्म रोडम्याप तयार गर्ने हो ।
दोस्रो एजेण्डा भनेको हामी निर्वाचित भएको तीन महिनाभित्र लिग सुरु गर्ने । लिग कस्तो फम्र्याटमा भन्दा विकेन्डमा मात्रै गर्ने । यो ६ महिनासम्म सञ्चालन हुन्छ । अफ सिजनमा हामी लिग गराउँछाैं । सिजनमा हामी मोफसलको प्रतियोगिता गराउँछाैं । १२ महिना नै फुटबलमय बनाउँछाैं । खेलाडीलाई व्यस्त बनाइराख्ने, क्लबहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने, तयारी खर्च बढाउने, म्याच फिक्सिङ हटाउन पुरस्कार राशि घटाउने आदि योजना छन् ।
भनेपछि नेपाली फुटबलमा म्याच फिक्सिङ चलिरहेको छ ?
म्याच फिक्सिङ त हामीले देखिरहेको कुरा नै हो नि । जित्नुपर्ने टिम हारिरहेको छ, हार्नुपर्ने टिम जितिरहेको छ । म्याच फिक्सिङ भनेको खेलकुदकै क्यान्सर हो । त्यसैले म्याच फिक्सिङ हटाउन विभिन्न मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।
लिगलाई व्यवस्थित गर्ने काम हामी गर्छौ । तीन वर्षभित्र फुटबल लिग व्यावसायिक बनाउँछौं । जबसम्म फुटबलमा व्यावसायिक लिग हुन सक्दैन, तबसम्म फुटबलको विकास हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लिगको प्रतिस्पर्धामा जानु आवश्यक छ । पूर्णरुपमा व्यावसायिक बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यसको दीर्घकालिन रोडम्याप बनाउँछौं ।
देशको हरेक जिल्लामा एकदेखि छ–सात वटासम्म ट्रेनिङ सेन्टर बनाउँछाैं । टेनिङ सेन्टर सफल भइसकेपछि हामी सातै वटा प्रदेशमा पुरुषको दुई वटा र महिलाको दुई वटा एकेडेमी बनाउँछौ ।
यो त एजेण्डाको कुरा भयो, तपार्इंले आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
मैले मेरो प्रतिस्पर्धी मणि कुँवरलाई त्यति बलियोको रुपमा हेरेको छैन । किनभने उहाँ र ममा के फरक छ भने मैले सी, बी र ए डिभिजनको क्लब चलाएर आएको हो । जिल्ला संघ हुँदै एन्फामा पनि काम गरिसकेको मान्छे । उहाँले मैलेजतिको कर्म गर्नुभएको छैन । म कर्मै गरेर आएको । म कमल थापाको भाइ भएर फुटबल संघको अध्यक्ष भएजस्तो होइन । राजनीतिक हिसाबले ठूलो नेताको छोरा होइन । मैले काम गरेको आधारमा सबै जिल्लाका साथीहरूले मलाई विश्वास गरेका हुन् ।
उनी गणेश थापाको सालो भएका कारण आएका हुन् । गणेश थापा फिफाले १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको मान्छे हो । प्रतिबन्ध लगाएको मान्छेलाई भोट दिन्छ कि साँच्चिकै प्रतिबन्ध लगाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मान्छेलाई भोट दिन्छ ?
हुन सक्छ, हिजो नेपाली फुटबल एउटा परिवारमुनि थियो । परिवारको मुनि नातावाद, कृपावाद थियो । परिवारवादले नेपाली फुटबल सञ्चालन गरेको थियो । केही दासहरू अझै पनि बाँकी होलान् । तर, दासबाट माथि उठेर धेरै मान्छे आएका छन् । अब नेपाली फुटबललाई विकास गर्नुपर्छ ।
तत्कालिन एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाविरुद्ध आर्थिक पारदर्शिता भएन भन्दै छानविनको मागसहित अभियान नै चलाउनु भएको थियो तर, त्यो अभियान अहिले कता पुग्यो ?
उहाँ आफ्नो नाता, दास र हनुमानलाई नै एन्फामा किन ल्याउन खोज्नु हुन्छ ? हामी एन्फामा पुग्यौं भने सबै कुराको पर्दाफास हुन्छ । भ्रष्टाचार छताछुल्ल हुने भयो । त्यसलाई लुकाउन, ढाकछोप गर्न पनि आफ्नो मान्छे ल्याउन खोजेका हुन् । जबसम्म हामी त्यहाँ पुग्न सक्दैनौ, तबसम्म हामीले उठाएको कुरा पूरा हुँदैन ।
लेखा समितिले प्रमाणित पनि गरिसकेको हो । अख्तियारले पनि सुरुमा त एक्सन नै लिइसकेको थियो । तर बीचमा अख्तियारले किन यस्तो गर्यो, मलाई पनि थाहा छैन । अख्तियारले तामेली राख्न सक्दैन । त्यस्तो केस हो तर राख्यो । त्यहाँ केही सौदाबाजी भएको छ, लेनदेन भएको छ । २–३ लाख घूस खाने मान्छे जेल जान्छ, करोडाैं कमाउने मान्छे मिलाएर बसी रहन्छ ।
तपाईं एन्फा अध्यक्ष हुनुभयो भने विगतमा एन्फामा भएको अन्यमितताको पुनः छानविन हुन्छ ?
छानविनभन्दा पनि हिजो जेजस्तो भएको थियो, त्यो हामी पुगेकै दिनदेखि अन्त्य हुन्छ ।
विगतमा भएको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ छानविन गर्नु हुन्छ की हुन्न ?
पहिले त अन्त्य गर्नुपर्यो नि । त्यसपछि गएर खेलाडी, प्रशिक्षक र फुटबलको विकास गर्नतर्फ लाग्नुपर्यो । व्यक्तिको पछि लागेर त्यो भ्रष्टाचारलाई नै छानेर बस्ने की फुटबलको विकास गर्ने ? पहिलो प्राथमिकता भनेको हामी अगाडि बढ्ने हो ।
पहिलेको भन्दा निकै अन्तरले जित्छाैं । मैले यसो हेर्दा ५५ देखि ६० भोट आउने देख्छु । हाम्रो यो स्पिड कायमै भइरह्यो भने त धेरै नै भोट आउँछ जस्तो लाग्छ । मान्छेहरू कसको पल्ला भारी भनेर हेरीरहेका हुन्छन् । जित्नेचाहिँ निश्चित नै छ । कति भोट आउँछ भन्ने संख्या मैले भन्न थालें भने त चुनावमा किन भाग लिनु ?